Odhaada Maanta: Waddada Loo Maruu Wadyaalaaye, Wacnaan La'haydaa Xornimo La Helaa! - Jigjiga Online
HomeSomalidaOdhaada Maanta: Waddada Loo Maruu Wadyaalaaye, Wacnaan La’haydaa Xornimo La Helaa!
Odhaada Maanta (Talk of the Town)
Waddada Loo Maruu Wadyaalaaye, Wacnaan La, Haydaa Xornimo La Helaa!
Maqaal dheer oo ilaa 20 bog ah oon u qoray magazine la odhan jiray Ethiopian Review May 1994, waxaan ciwaan uga dhigtay “Politics of Self-Determination and The Ogaden Crisis,” ama “Siyaasada Xornimadoonka iyo qalalaasaha Degaanaka DDS.” Dhowr Cutub ayuu maqaalku ka koobanaa.
Waxaan bal isku dayi doonaa in aa inta nuxurka ah si kooban AfSomali ku turjumo. Danta aan ka leeyahay waa in aynaan Soomaali ahaan dib u galin ama aynan falin qaladaadkii hore loo galay.
Sida aad hadhow arki doonto, qaladaadkaasi waxa muhiim ka aha midnimo la’aan, tafaraaruq, iyo fahmi daro ku aadan dawlada Itoobiya iyo xeeladaheeda. Waa in madaxdu talo-wadaag yeelataa cunugyada caytamina cariga laga qabtaa.
Shanta cutub ee maqaalku waxay kala ahaayeen sidan: (1) hordhac; (2) Nuxurka ama Unuga dhibta Deegaanka (Roots of the Crisis); (3) Ku kal fikir duwanaansha aayo ka taliska (Differences over Self-determination); (4) Siyaasada Midnimo ama tan aayo ka talis (Politics of Unity vs. Secession); (5) Siyaasada Isherdiga ee Qabaa’ilka (Politics of Clan Conflict).
Waxaan maqaalka ku daah furay sadaradan:
“The road to hell is paved with good intentions- may be with the EPRDF’s policy of “self-determination,” ama hadii aan AfSoomaali ku badilao “jidka jixiimo loo maro waxa goglan oo ka soo horeeya wanaag badan. Malaha waji wanaag EPRDF ina tusi waa jidkii Jixiimo iangu ridaayey.” Waxaan maah maahdaas u soo qaatay in 1991 Soomali lagu soo xero galiyey xornimo la hor lulay. Meles oo xiligaas masuul fiican iska dhigaya ayaa Ocober 1992 isugu keenay 13 oday dhaqameedyo (Garaado, Ogaasyo, Suldaano) oo Sokmaali oo dhan ka soo jeeda magaalada Addis Ababa.
Waxa uu u diray in ay aadaan Soomaaliya nabadna ka soo dhaliyaan “walaalaha islaynaya.” Intaas waxa u dheeraa in Meles dhamaystiray isbadalo sida Ismaamul Soomaali loo sameeyey, AfSomali oo noqday farta iyo afka xafiisyada lagu shaqeeyo. Arimahaasi niyad wanaag u ekaa ma waxay ahaayeen jidkii narta loo marayey? Maqaalku waxa uu ku jawaabayaa, haa oo wanaagii EPRDF/TPLF Soomaali u muujisay ka ma duwanayn jid qurux badan iyo falaka aduunka lagu baxayso ee ugu dambayn kugu rida jidka naarta kugu rida.
Jac iyo baaruud ayaa ka dambeeyey balanqaadyo uu Meles galay. Waxaana arintu dibada u soo baxday markii ay shirweyn yeehseen Soomali ay ONLF ugu tunweyntahay lagagana dhawaajieye fakirka aayo katalinta Soomaalida. Waxay Soomaali badani isku raaceen xiligaas in “aayu ka talis” la raadiyo. Lasoco oo waa xiligii aritna gooni isutaaga Eriteriya socotay.
Runtuse waxay noqotay in EPRDF oy TPLF/OPDO horumood ka ahaayeen dab iyo naar ku shidaan Soomaali. Shirweynihii 1994 la qabtay dabadeed, waxa deegaanku galay nidaam cusub oo gacan bir ah lagu qabtay deegaanka, militari xoog lehna waa la soo dajiyey (militarization), siyaasiyiintii iyo wax garadkii deegaankana waa la kala qaybiyey. Had iyo jeer waxa korka in uu ka ilaaliyo Dawlad Deegaanka Soomaalida loo sameeyey nin Axmar ah oo Addis Ababa fadhiya.
Waxa loo adeegsay sida aan maqaalka ku sheegay xeelad gumeysi oo gumeysigii Ingriisku Afrika ku dhaqi jiray, loona yaqaan “Lord Lugard’s Indirect Rule,” ama Xukunka Dahsoon ee Lord Lugard.”
Dhacdooyinkii daba socday shirweynihii ONLF qabatay January 1994, waxa astaan u noqday dilal waxuushnima ah oo fara badnaa oo EPRDF Soomaali u gaysatay. OPDO iyo ONLFna Jijgiga dhexdeeda ayey ku dagaalameen. Wa xiliga la hindisayo in Jigjiga xad noqoto Jinacsanina si uun loo raaciyo OPDO iyo Oromiya. Arintaasina waxa hirgaliyay dawladii MW Ina Jibriil taariikhdu markay ahayd 2004. OPDO xiligaa waxay TPLF u ahyd gacanyare aad loo adeecsan yahay. Arimaha Soomaaliduna 100% waxay gacanta u galeen Kifladoorka ama xerada Militariga ee Jigjiga ku taal. Maamulada Soomaaliduna macmal iyo magac u yaal ayey noqdeen.
Warbixin dheer oo xaasaasi ah oo xanuun badnaa oy soo diyaarisay hay’ada Amnesty International bishii February 1994 ayaan maqaalka ku soo qaatay oo sadaran hoos ku xusan ugu muhiimsanaayeen:
“Amnesty International fears for the safety of many people detained since late January 1994 in different towns… This fear is increased by reports of the killing, wounding, torture or ill-treatment of some of those detained, and that Mohammed Omer Tube, Abdulahi Ganey and Deeg Mohamed Arab were killed after being arrested by soldier, that Hajiio Dama and Dulane Hassan Nur were ill-treated in detention and that Gayare Aden Olhaye shot and wounded in custody.”
Hay’ada Caalamiga ee xuquuqda aadamiga u dooda waxay u baqaysaa jid-dilka loo gaysanayo dadkaasi xidhan., gaar ahaan dilka askartu u geysatay maxaabiista kala ahaa Mohamed Tube, Abdulaahi Ganey iyo Deeg Mohamed Arab. Waxa kale oy ka hay’adu jiddilka loo geystay Hajiyo Dhama, iyo Dulane Hasssan Nur, iyo dhaawaca loo geystay Gayare Aden Olhaye isaga oo gacanta askarta ku jira.”
Danane iyo degmooyinka ku yaal koonfur galbeed dilal badan ayaa ka dhacay. Madax kale oo badan goobo hadsoon ayaa loo dhaadhiciyey oy maxaabiis ku yihiin. Warbixinta Amnesty waxa kale oy warwer xoogan ka muujisay dadka faraha badan eek u kala xidhan Godey, magaalo madaxda Dawlad Deegaanka ee xiligaas, Qabri Dahar, Wardheer, Qalaafo, iyo degmooyin ku yaal koonfur galbeed oo ka tirsan Dawlad Deegaanka.
Warbixintan Amnesty International waxay diyaarisay bishii February 1994. Waxaan ana Maqaalka dhameeyey April, May 1994 waa la soo daabacay. Cutubyada soo socdana waan idin la wadaagi doonaa. Muhiimadu waa in taariikhdii la soo maray in waxa laga barto. Waxaan arkaa in aynu weli wadooyinkii aynu ku hongownay weli saaranahay.
“Those who don’t remember their past are condemned to repeat their mistakes,” ama “Jiil’kaan xasuusan taariikhda uu soo maray, tubtii hore ee qaldanay ayuu dib u qaadaa.”
Waabilaahi Tow Fiiq